Ukuba i-CAC yakho ingama-20 eedola ngomthengi ngamnye, oko kuqinile buyela kutyalo mali, echitha i- $ 10k ukubuyisela abathengi abangama-500 abaseleyo. Kodwa kuthekani ukuba unokonyusa ukugcinwa kwe-1% ngokuchitha enye i- $ 5 ngomthengi ngamnye? Oko kunokuba yi- $ 25,000 echithwe kwinkqubo yokugcina. Ingayonyusa i-CLV yakho ukusuka kwi- $ 1,782 ukuya kwi- $ 1,980. Ngaphezulu kobomi babathengi bakho abangama-5,000 XNUMX, ukonyuse nje umgca wakho ophantsi phantse kwisigidi seedola.
Olu lolona lwazi bendilufuna. Enkosi ngokwabelana ngobuchule bakho!
Ndinombulelo kuba ndilifundile inqaku lenu. Oku kuya kuba nefuthe kwizigqibo zam zexesha elizayo kwishishini lam. Ngokwenene kufuneka sibanyamekele abo banyanisekileyo kuthi.